कपिलवस्तुमा मात्र एकैपटक १२ जना संक्रमित फेलापरे – Sanchar Patrika
कपिलवस्तुमा मात्र एकैपटक १२ जना संक्रमित फेलापरे
May 20, 2020 316
काठमाडौं, ७ जेठ । बुधवार कपिलवस्तुमा मात्र १२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । कपिलबस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा ९ जना र विजयनगर गाउँपालिकामा ३ गरी १२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ । संक्रमित मध्ये ६ जना महिला र ३ जना पुरुष छन्। कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुख (एसपी) दीप शमशेर जबराले त्यसको पुष्टि गर्दै उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका अन्य ब्यक्तिको पनि खोजि सुरु गरिसकिएको जनाएका छन् । एकै पठक ठूलो मात्रामा कोरोना पुष्टि भएपछि उनीहरुलाई ब्यवस्थापनको तयारी पनि सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएका छन् ।
संक्रमित देखिएका सबै भारतवाट आएको पनि बताइएको छ । उनीहरु वैशाख २२ र २३ गते भारतबाट आएका थिए । भारतवाट आएका उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । १२ जनालाई कोारनो पुष्टि भएपछि संक्रमित भएका र नभएकालाई क्वारेनटाइनमा अलग्गै राखिएको छ । संक्रमित मध्ये ८ जना महाराजगन्ज नगरपालिकाको वडानम्बर ९ को क्वारेन्टिनमा र एक जना नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा छन्।
सोमबार नगरपालिकाका क्वारेन्टिनमा रहेका १०८ जनाको स्वाब संकलन गरिएका मध्य ९ जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको हो । संक्रमितलाई बुटवल वा दाङको अस्पतालमा पठाउने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। विजयनगरमा देखिएका संक्रमितहरुमा दुई पुरुष र एक महिला रहेका छन्।
Prevकोरोना भाइरसले खाडी मुलुकमा ७३१ को मृत्यु, १ लाख ५० हजारभन्दा बढी संक्रमित
Nextदेशभर कोरोनाले आतंकमच्चाईरहेका बेला भक्तपुरमा घट्यो अनौठो घटना, स्थानीयवासी परे अचम्म, मच्चियो हल्लीखल्ली !
राष्ट्रकविको निधनमा पूर्वराजाद्वारा दु:ख व्यक्त
राम्री युवतीसँग विवाह गर्नुको बेफाइदा
भारतबाट सलह नेपाल छिर्दै, अब अर्को भयावह चुनौती थपिने ! (6191)
काठमाण्डौका यी ठाउँहरुमा कोरोना संक्रमित भेटीएपछि सिल ! (2758)
१८ साताकी गर्भवती महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि, जङ्गलमा लगेर यसरि गरियो दाहसंस्कार (2606)
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने ! (2306)